Miyuu Di Maria Ololaha soo aadan ku biirayaa Juventus? | TOP NEWS
Miyuu Di Maria Ololaha soo aadan ku biirayaa Juventus?
By Mohamed Abdulle Hassan on May 29, 2017 No Comment
Waxaa loo aqoonsaday inuu ku fashilmay noloshiisii koobneyd ee Manchester United Angel di Maria, laakiin ogow markasta waa mid kamid ah ciyaartoyda ugu farsamada badan ciyaarta casriga ah ee maanta. hadda, waxa ay u muuqataa xirfada laacibka heerka caalami ee dalka Argentina mid qurux badan, waxa uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo uu dib ugu laabanayo kooxaha waaweyn ee dunida ku xifaaltama. Ka dib laba xilli ciyaareed oo uu ku hantay lix koob oo waa weyn isagoo kusugan Paris Saint-Germain, kooxda heysata horyaalka Talyaaniga ee Juventus ayaa hogaamineysa tartanka loogu jiro saxiixa Di Maria. Warar hore u soo baxay ayaa sheegayay in agaasimaha Isboortiga Bianconeri Fabio Paratici uu la kulmay Pablo Sabbag, oo ah wakiilka Di Maria.
Juventus ayaa sidookale isha ku heysa xaalada ciyaaryahanka khadka dhexe ee AS Roma, Leandro Paredes.
Di Maria ayaa £ 60 million oo ah qiimaha ugu sareeya ee ciyaartooy koox England ah ku iibsato ugu dhaqaaqay Manchester United, laakiin falsafadii Ambaasadoor Louis van Gaal oo ahaa macalinkii United ayuu la qabsan waayay.
Wuxuu ka ciyaaray garabka, No. 10 iyo xitaa weerarka muddo kooban oo uu kusugnaa Manchester United.
Di Maria ayaa marna fursad u helin inuu ka ciyaaro booska joogto ah ee uu jecel yahay, taasoo keentay inuu si lama filaan ah ku doorto kooxda ka dhisan Paris. Di Maria, ayaa lagu qiimeeyaa mid ka mid ah kubadsameeyayaasha ugu fiican adduunka tobankii sano ee la soo dhaafay.
29 jirkaan ayaa hadda wuxuu ku fakirayaa inuu u dhaqaaqo dalka Italy, halkaaso xiiso ay ugu qabto kooxda Juventus. Shaki kuma jiro in Di Maria tan iyo markii uu gaaray France inuu sameyn badan yeeshay, inkastoo uu ku fashilmay xirashada No. 7 ee Manchester United.
Si kastaba ha ahaatee, xilli ciyaareedkiisii ugu horeyay PSG ayuu sameeyay wax lala yaabo markii uu dhaliyay 15 gool isagoo caawiyay 25 kale. Laakiin carada Taageerayaasha PSG ayuu wajahay, kuwaasoo ku ooriyay intii ay soctay ciyaartii barbaro 2-2 ah kooxdiisa la gashay Ludogorets tartanka Champions League, halka wargeyska L’Equipe uu ku abaalmariyay kulankaasi Flopkii garoonka.
Miyuu Di Maria Ololaha soo aadan ku biirayaa Juventus? added by Mohamed Abdulle Hassan on May 29, 2017